Turkiga oo markii ugu horeysay ka hadlay in ciidamo Soomaaliyeed la geynayo Libya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Turkiga oo markii ugu horeysay ka hadlay in ciidamo Soomaaliyeed la geynayo Libya
Safiirka dowladda Turkiga ee Sooomaaliya Mehmet Yilmaz oo wareysi siiyey wakaaladda wararka Anadolu Agency, ayaa markii ugu horeysay ka hadalay warar sheegayey in ciidamo Soomaali ah la geynayo dalka Libya, si ay uga barbar dagaalamaan dowladda taagta daran ee Libya oo dagaal adag kula jirta maleeshiyaadka uu hoggaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar.
Danjire Yilmaz ayaa sheegay in wararkaas ay faafinayaan dalal cadow ku ah dowladiisa Turkiga, waxuuna ku tilmaamay been abuur.
“Baraha bulshada Soomaaliya waa kuwa aad u xooggan. Waxaan ka aragnaa dadaallo ay dalalka qaar wadaan oo ay dantooda ku fulinayaan. Waxaan u aragnaa arrintan olole qorsheysan. Wararka ma ahan kuwa run ah, waxba kama jiraan,” ayuu yiri Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa horay u beenisay in ciidamo Soomaaliyeed la geynayo Libya, si ay uga barbar dagaalamaan garab kamid ah dhinacyada isku haya dalka Libya.
“Ma jiraan ciidan aan u direyno Libya, ciidamada Soomaaliya-na ma ahan calooshood u shaqeystayaal, sida ciidamada kale ee la sheeg-sheegayay. Marka anaga ma haysano calooshood u shaqeystaal” waxaa sidaas horay u yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Turkiga oo markii ugu horeysay ka hadlay in ciidamo Soomaaliyeed la geynayo Libya was last modified: August 5th, 2020 by Admin
Madaxweyne Trump oo baajiyey Shirweynaha xisbi xaakimka Jamhuuriga